We.com.mm - ချစ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့ရတာရိုးနေပြီဆိုရင် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ
မတွေ့ရင်လည်း မနေနိုင်ဘူး။ တွေ့ပြန်တော့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ စားမယ်၊ သောက်မယ်၊ စကားပြောမယ်။ ဒါတွေပဲ ဖန်တစ်ရာတေနေပြီ။ ချိန်းတွေ့နေကျဆိုင်က ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တောင် ရင်းနှီးနေပြီ။ ပျင်းလွန်းလို့နှစ်ယောက်သားတွေ့ရင် ဖုန်းပဲထိုင်ပွတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး။ ဒါကြောင့် နည်းနည်း ဆန်းသစ်တဲ့ ချိန်းတွေ့နည်းတွေကို အလင်းပြပါရစေ။
၁. ဝါသနာပါတာ အတူလုပ်မယ်
တစ်ယောက် ဝါသနာပါတဲ့အရာကို တစ်ယောက်က လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် google တို့Youtube တို့ကနေ ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့် Activity တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်။ အတူတူပေါင်းလုပ်လို့ ရတာတွေရှိသလို ယှဉ်ပြိုင်ပြီးလုပ်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ကိတ်မုန့်အတူဖုတ်စားတာ၊ သိုးမွေးပြိုင်ထိုးတာ၊ ပန်းချီအတူဆွဲတာ၊ အားကစားတစ်ခုခုပြိုင်လုပ်တာ၊ စတာတွေပေါ့။
၂. တစ်ခုခု ဆောက်လုပ်ကြည့်မယ်
ဒန်းစင်ဆောက်တာ၊ သစ်ပင်ပေါ်အိမ်ဆောက်တာ၊ သစ်ပင်အောက်ခုံတန်းဆောက်တာ၊ ရွက်ဖျင်တဲထိုးတာ၊ ကမ်းခြေမှာဆိုရင် သဲပုံနန်းတော်ဆောက်တာ၊ ကစားစရာဆိုရင် lego အတုံးလေးတွေဆက်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ ကလေးဆန်တယ်လို့ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်သားအတူဆောက်လုပ်တဲ့အတွက် teamwork စိတ်ဓာတ်ကိုရစေပြီး အမှတ်တရလည်း ဖြစ်တာပေါ့။
၃. တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဝတ္ထုရေးပါ
ဒီလိုရေးတာက တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ဆုံတဲ့ပုံ၊ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ချင်းက မတူနိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ်က သူ့ကို ဘယ်လိုစတွေ့တယ်၊ ဘယ်မှာတွေ့တယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာစစိတ်ဝင်စားတယ်၊ မှတ်မိသလောက် အသေးစိတ်လေးရေးပါ။ ပြီးရင် တစ်ယောက်စာတစ်ယောက် ဖလှယ်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါ။ ပျော်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကြည်နူးမှုတွေကိုရမှာပါ။
မြစ်ချောင်း အင်းအိုင် သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးရေထဲမှာ ကခုန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေပန်းတွေကြား ပြေးဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်ပါ။ ရေထိလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အပူတွေထွက်သွားပြီး စိတ်အပမ်းပြေစေပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းပြီးတော့ ရိုမန်းတစ်ဆန်တဲ့ dating မျိုးဖြစ်မှာပါ။
၅. ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ပါ
အမှိုက်အိတ်လေးဆွဲပြီး အမှိုက်ပြိုင်ကောက်၊ ပြီးရင် ပိုများတဲ့သူက မုန့်ဝယ်ကျွေးကြေးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လဲ သစ်ပင်ပြိုင်စိုက်၊ ဘယ်သူ့အပင်က ပိုရှင်သန်လဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်။ ဒီလို ချိန်းတွေ့တာ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတော့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အမှိုက်ကင်းစင်ပြီး စိမ်းလန်းသွားတာပေါ့။ ဒီလို ချိန်းတွေ့မှုမျိုးကိုတော့ လူတိုင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တာပဲ။
ခုပြောခဲ့တဲ့ dating idea တွေကို အတွဲတွေ အတော်များများက မလုပ်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ လုပ်ကိုလုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အတွဲတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့လည်း လုပ်လို့ရတာပဲလေ။ ကိုယ့်အတွက်ရော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ အကျိုးရှိမယ့် တွေ့ဆုံခြင်းမျိုးနဲ့တွေ့တော့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။